ဖြိုးမြတ်အောင် အင်္ဂလိပ်လိုဆိုထားတဲ့ သီချင်းရှိလား..လို့ မေးခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ကိုကိုလင်းမောင်....
ဖြိုးမြတ်အောင် အင်္ဂလိပ်လိုဆိုထားတဲ့ သီချင်းရှိလား” လို့ မေးခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ ကိုကိုလင်းမောင်
တစ်ချိန်က နာမည်ကျော် သရုပ်ဆောင် ကိုကိုလင်းမောင်ကတော့ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုရဲ့ပြိုင်ဖက် ဖြိုးမြတ်အောင် အင်္ဂလိပ် သီချင်းဆိုထားတာရှိရင် ပြစမ်းပါလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
သူဟာ ဘယ်သူ့ဖန်မှမဟုတ်ပေမယ့်လည်း ဆေးထိုးတဲ့သဘောနဲ့ လုပ်တယ်လို့လည်း စကားဦးခံထားပါသေးတယ်
သူ့ရဲ့ဖေ့ဘုတ်မှာတော့ မြန်မာအိုင်ဒေါအကြောင်းအချို့ ရေးသားထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ “ဆးထိုးလတ်အူးမယ်နော် # ပြိုင်ဖက်က အာ့လို(ဘိုလို) ဆိုထားတဲ့သီချင်းလေးများရှိယင် … ? လွတ်လပ်စွာပြောဆိုနိူင်ပါသည်… (*မှတ်ချက်* ကျနော်မည်သူ့FANမှမဟုတ်ပါ)” ဆိုပြီး ရေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုကိုလင်းမောင်က တစ်ချိန်က ဇာတ်ကားများစွာရိုက်ကူး လူသိများခဲ့ပေမယ့် ခုနောက်ပိုင်းတော့ ဇာတ်ကား မရိုက်တော့သလောက် ဖြစ်နေပါ
ဖွိုးမွတျအောငျ အင်ျဂလိပျလိုဆိုထားတဲ့ သီခငျြးရှိလား” လို့ မေးခှနျးထုတျလိုကျတဲ့ ကိုကိုလငျးမောငျ
တဈခြိနျက နာမညျကြျော သရုပျဆောငျ ကိုကိုလငျးမောငျကတော့ ခမျြးမွမေ့ောငျခြိုရဲ့ပွိုငျဖကျ ဖွိုးမွတျအောငျ အင်ျဂလိပျ သီခငျြးဆိုထားတာရှိရငျ ပွစမျးပါလို့ ပွောလိုကျပါတယျ။
သူဟာ ဘယျသူ့ဖနျမှမဟုတျပမေယျ့လညျး ဆေးထိုးတဲ့သဘောနဲ့ လုပျတယျလို့လညျး စကားဦးခံထားပါသေးတယျ
သူ့ရဲ့ဖဘေု့တျမှာတော့ မွနျမာအိုငျဒေါအကွောငျးအခြို့ ရေးသားထားတာကို တှရေ့ပါတယျ။ “ဆးထိုးလတျအူးမယျနျော # ပွိုငျဖကျက အာ့လို(ဘိုလို) ဆိုထားတဲ့သီခငျြးလေးမြားရှိယငျ … ? လှတျလပျစှာပွောဆိုနိူငျပါသညျ… (*မှတျခကျြ* ကနြျောမညျသူ့FANမှမဟုတျပါ)” ဆိုပွီး ရေးထားတာ ဖွဈပါတယျ။
ကိုကိုလငျးမောငျက တဈခြိနျက ဇာတျကားမြားစှာရိုကျကူး လူသိမြားခဲ့ပမေယျ့ ခုနောကျပိုငျးတော့ ဇာတျကား မရိုကျတော့သလောကျ ဖွဈနပေါ